Cudurka Canser-ka malaga hortagi karaa?
Author Topic: Cudurka Canser-ka malaga hortagi karaa? (Read 5981 times)
« on: October 04, 2009, 06:35:45 PM »
waxaan maqalnay in uu cudurka canser-ka daawo laheyn, marka waxaan idin waydiin meeqo nooc ayuu u kala qeyb samaa cudurka kansarka, dhamaan soomaalida maku dhacaa? Daawo ma leeyahay? cudurka Kansarka malaga hortagi karaa?.
Re: Cudurka Canser-ka malaga hortagi karaa?
« Reply #1 on: October 06, 2009, 11:17:33 PM »
Kansarka daawo malahan, meelo badan oo jirka ka mid ahne wuu asiibaa, soomaalida wuu ku dhacaa inkastoo ay dhici karto in qeybo ka mid ah uu ku badan yahay, kansarrada qaar ka mid ah waa laga hortagi karaa.
Halkaan ka akhriso qoraallo ku saabsan kansarka:
Views: 23709 April 29, 2016, 09:52:03 PM
Views: 27014 December 10, 2007, 08:31:26 PM
Views: 10914 January 06, 2012, 10:02:19 PM
Views: 13282 December 08, 2012, 08:59:58 PM
Views: 14137 January 24, 2009, 11:26:50 PM